12 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 12 ပတ်သားကလေး
ဤအချိန်တွင် သင့်ကလေးငယ်သည် ဘယ်လောက်မြန်မြန်ကြီးထွားလာသည်ကို သင်သိမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယလ၏ လေးပတ်မြောက်တွင် သင်၏ ကလေးငယ်သည်
• လက်တွေကို ဆွဲဆိတ်နို်င်သည်။
• မှောက်နေလျှင် သူ့ခေါင်းကို ၉၀ ဒီဂရီ ထောင်မတ်နိုင်သည်။
• အသံအကျယ်ကြီး ရီမောနို်င်သည်။
• သူတစ်ခုခုလိုအပ်လျှင် အော်ဟစ်နိုင်သည်။
• သူ့နေရာကနေ ၁၅ စင်တီမီတာအကွာမှ ပစ္စည်းရှိရာသို့သွားနိုင်သည်။ မျက်နှာကို တစ်ဖက်သို့ ၁၈၀ ဒီဂရီ လှည့်နိုင်သည်။
ကျွနု်ပ်၏ကလေးကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်ပါလဲ။
ကလေးရဲ့ဘေးမှာ စာကျယ်ကျယ်ဖတ်ပြတာသည် ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်မှ သင့်အသံကို ကြားနေရလျှင် စကားပြောခြင်း၏ သံစဉ်အနေအထားကို သင်ယူနိုင်ရန်ကူညီပါသည်။ စာဖတ်နေစဉ် အသံအနေအထားကို အနိမ့်အမြင့်ထားပြီးဖတ်ခြင်းနှင့် သီချင်းဆိုခြင်းသည် သင့်ကလေးကို ပို၍စိတ်ဝင်စားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူစိတ်မ၀င်စားတော့လျှင် သူ့ကို ခဏအနားပေးလိုက်ပါ။
သင့်ကလေးငယ်ကို ဖတ်ပြဖို့ စာအုပ်များစွာရှိပါသည်။ ပုံတွေများများပါသော၊ အရောင်တောက်သောစာအုပ်များ၊ သို့မဟုတ် ပုံများသာပါသော စာအုပ်များကို သင့်ကလေးအတွက် ရွေးချယ်ပါ။ စာအုပ်ရွေးရာတွင် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို သိပ်အာရုံမထားပါနှင့်။ ကလေးကြီးတွေကို ရည်ရွယ်သောစာအုပ်များသည်လည်း အရောင်တောက်ပပြီး ရှင်းလင်းသောပုံများပါလျှင် ကလေးငယ်တွေကို စွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ကလေးငယ်အတွက် ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို သင်ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
• ကလေးငယ်ကို ထွေးပွေ့ပါ။
• ကလေးနှင့်အတူနေပေး၊ ကစားပေးပါ။
• ကလေးနှင့် စကားပြောပါ။
• ကစားနည်းများကိုကစားပေးခြင်းဖြင့် သူနေပျော်အောင်လုပ်ပါ။
• ကလေးအတွက် သီးသန့်နေရာလုပ်ပေးပါ။
• ကလေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို လိုက်လုပ်ပေးပါ။
• အရာအားလုံးကို အချိန်ကိုက်ပြုလုပ်ပေးပါ။
ကလေးရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆရာဝန်မှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဆရာဝန်သည်
• ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်၊ ဦးခေါင်းလုံးပတ်အတိုင်းအတာ နှင့် မွေးပြီးသည့်နောက် ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။
• ယခင်က ကျန်းမာရေးပြဿနာများအပါအ၀င် ကျန်းမာရေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
• နောက်ပိုင်းလများတွင် သင်သိဖို့လိုအပ်သော ကလေး၏ အစားစားခြင်း၊ အိပ်ခြင်း ကြီးထွားခြင်းနှင့် ကလေး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဆရာဝန်မှ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။
• ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အခါတွင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးရနိုင်သည်၊ သင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်သည်၊ ဆိုသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေးတွင် မည်သည့် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လျှင် ဆရာဝန်ထံသွားရမည်ဆိုသည်ကို လည်း ပြောပြနိုင်ပါသည်။
တစ်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့သော ကျန်းမာရေးပြသနာများကိုလည်း သင်အာရုံထားသင့်ပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အချက်အလက်များကို ကောင်းစွာမှတ်သားထိန်းသိမ်းထားပါ။ ကလေး၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များအားလုံးချရေးမှတ်သားပါ။
အောက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာအချို့ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ကလေး၏ ဦးခေါင်းပြားနေသည်မှာ ကလေးအိပ်ချိန်အရမ်းကြာသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မွေးခါစအချိန်တွင် ကလေး၏ ခေါင်းခွံသည် အလွန်ပျော့ပြောင်းပြီး ပုံပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညဘက်အိပ်သောအခါ အိပ်သောမွေ့ရာအနေအထားအရ ကလေး၏ ဦးခေါင်းပြားနို်င်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ များသောအားဖြင့် ကလေးစပြီး လေးဘက်သွားချိန်၊ ထိုင်ချိန်ရောက်လျှင် ကလေး၏ ခေါင်းပုံစံ ပုံမှန်ပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေး၏ ခေါင်းအခြေအနေကို စိတ်ချလိုလျှင် ဆရာဝန်ထံသွား၍ အခြေအနေသည် အန္တရာယ်မရှိကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးဆံပင်နည်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိပ်ပြောင်ခြင်း
ကလေးနေတတ်သော အနေအထားပုံစံပေါ်မူတည်၍ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်းဖြစ်နုိုင်သဖြင့် ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်သည် အလွန်ဖျားနာသည့်အခါ ပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြင့် အကြာကြီးနေခြင်း၊ အိပ်ရာပေါ်တွင် လူးလိမ့်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိန်မျိုးတွင် ဆံပင်ကျွတ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးကြီးလာလျှင် ထိုသို့သော ပုံစံမျိုးမနေတော့သည့်အခါ ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ဆံပင်ဘယ်အချိန်ပြန်ပေါက်မည်ကို ခန့်မှန်းရန်ခက်ပါသည်။ ကလေးအများစုသည် အသက်တစ်နှစ်မတိုင်ခင် ဆံပင်သိပ်မရှိကြပါ။ သို့သော် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းသည် ကလေးများတွင် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ အချို့ကလေးများသည် ဆံပင်ကျွတ်ပြီး ချက်ချင်းမကြာမီ ပြန်ပေါက်ကြသော်လည်း အချို့တွင် အချိန်ကြာတတ်ပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အလေးအပင်မသော လူကြီးများတွင် ဖြစ်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း အလေးအပင်မ ‘မ’ရသော ကလေးငယ်များတွင်လည်း ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးများ၊ လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများနှင့် အမြွှာကလေးများတွင် အဖြစ်များသည်။ သင့်ကလေးတွင် အူကျခြင်းရှိလျှင် ကလေး၏ ပေါင်နှင့် ၀မ်းဗိုက်ကြားတွင် အဖုအကျိတ်ပေါ်ခြင်းကို ကလေးငိုသည့်အခါမျိုးတွင် သင်သတိထားမိလိမ့်မည်။ ထိုအဖုအကျိတ်သည် ကလေးငြိမ်သက်နေသည့်အခါတွင် ပျောက်နေတတ်သည်။ သင်၏ ကလေးသည် ကပ်ပယ်အိတ်ထဲသို့အူကျခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အူကျခြင်းသည် ကလေးကို မည်သို့မျှ မထိခိုက်မနာကျင်စေပါ။ ချက်ချင်းကုသလျှင် ကလေးကို အန္တရာယ် မရှိပါ။
ကလေး၏ ပေါင်ခြံ သို့မဟုတ် ကပ်ပယ်အိတ်အတွင် အဖုအလုံးတွေ့ခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ဆီသို့ ချက်ချင်းခေါ်သွားပါ။ ဆရာဝန်မှ ကုသမှုပေးပါလိမ့်မည်။ ခွဲစိတ်ကုခြင်းသည် အောင်မြင်နှုန်းများပြီး လွယ်ကူသောကြောင့် ဆရာဝန်များ သည် အူကျသောကလေးများအတွက် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ခွဲစိတ်ပြီးလျှင် အူကျခြင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းသည် အလွန်ရှားပါးသည်။ အူကျခြင်းကို မကုသလျှင် ထွက်ကျသော အူကို အပေါက်ဘေးမှ ကြွက်သားများ၏ ညှစ်အားကြောင့် သွေးစီးဆင်းမှုပိတ်တတ်ပြီး အူရောင်ခြင်း၊ အူပုပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လက္ခဏာအားဖြင့် အန်ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း နှင့် သွေးလန့်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကလေး ရုတ်တရက် အရမ်းငိုခြင်း၊အန်ခြင်း၊ နှင့် ၀မ်းမသွားလျှင် ဆရာဝန်ထံသို့ ချက်ချင်းသွားပါ။ ဆေးခန်းဝေးလျှင် အူကျသောအပိုင်းတွင် ရေခဲကပ်ပေးခြင်းဖြင့် အရောင်ကျအောင်လုပ်နိုင်သည်။ လက်နှင့် အတင်းပြန်သွင်းခြင်း မလုပ်ရပါ။
အောက်ပါတို့သည် သင်စိုးရိမ်နေနိုင်သော အချက်အချို့ဖြစ်ပါသည်။
ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေညွှန်းကိန်းများသည် ကလေး၏ တိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုရပ်တန့်ခြင်းကို တိုင်းတာရန်အသုံးဝင်သည်။ သင့်ကလေးကို အခြားကလေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် မလိုအပ်ဘဲ သင့်ကို စိတ်ပူစေပါသည်။ ပုံမှန်ကလေးနှစ်ယောက်သည် မတူညီသော အခြေအနေနှစ်ခုတွင် ကြီးပြင်းရလျှင် သူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် လုံးဝကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ကလေးများကြား ခြားနားမှုသည် အသက်တစ်နှစ်ရှိသောအခါ ပို၍သိသာလာပါလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်က တစ်နှစ်တွင် လေးဘက်တွားသွားပြီး အသက် ၁၅ လတွင် လမ်းစလျှောက်ချိန်တွင် အခြားတစ်ယောက်သည် ဆယ်လတွင် လေးဘက်တွားမသွားပဲ လမ်းစလျှောက်ဖို့စတင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိဘများ၏ အကဲဖြတ်မှုသည် လုံးဝမမှန်ကန်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးကို အခြားကလေးများနှင့် မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ။
Print. Page 212-248.
ရေချိုးပြီးရင် ဝှေးစေ့က အောင့်သလိုခံစားရတာ ဘာကြောင့်လဲ